Muqdisho Waa Magaalo Macna Badan
Waxaa dhowaan, insha Allah, soo baxaya CD-gii mudada dheer lasugayey, waa kii ugu horeeyey ee HTML iyo Macluumaadka Internetka oo Af-Soomaali ah, si aad wax uga ogaatid CD-gaas Guji.Halkan
Agoosto 6, 2002
Magaalada Muqdisho, caasimaddii dalka Soomaaliya, hoygii nabadda iyo amaanka, xadaaradda iyo tacliinta, cimilada wangaasan ee dhexdhexaadka, khudaarta aan wali dhadhin ee macaan, badda iyo wabiyaduna, hareer maraan. Dhismayaal qurxoon oo aad u bilicsan geedaha loo yaqaan geed tallaalkuna ku sharaxnaa guri walba iyo laami walba, lahayd meelo taariikhiya oo ka tarjumaysay sooyaalkii jiritaaneed ee ummadda Soomaaliyeed, wixii ay soo martayba. Muqdisho oo dhisan in ka badan 1000 sano, ayaa waxay ahayd meel isku xirta gobolada dalka Soomaaliya oo dhan, inkastoo ay wali sidii ugu tahay udubdhexaad. Magacyo fara badan ayay ummada Soomaaliyeed ula baxday Muqisho sida: Xamar cadeey, Benaadir, magaaladdii sidaa ahayd Ayaa waxay maanta nasiib u heshay inay noqoto god dheer oo mugdiyo qiiq madowna ka baxayo, waa meel manta laga cabsado, waa meel aan loo soo hilobayn, haddii aad mar timadana marka labaad kugu soo dhicimayso inaad ku soo laabato……..
Saaka subaxii hore markii waagu baryay ayaa laga helay gabar da’deeda lagu qiyaasay 12 sano jirta oo mayd ah, garoonkii hore ee kubadda cagta, gabadhan maydka ah ayaa la sheegay in ka dib la ogaaday in xittaa loo galmooday, dhaawac xun ayaa ka muuqday wajigeeda, waxaa suuroobi waysay in si wanaagsan loo aqoonsado wajiga gabadhaas oo la sheegay in uu isku dunsana ayna maqnaayeen qaybo ka mida jirkeeda sida dhegta iyo sanka.
Falalkan argagaxa leh ayaa waxay ahaayeen asbuucyadii u danbeeyey kuwo soo noqnoqonaya iyadoo aan la garanayn cidda falkan gaysanaysa.
Waxaa sidoo kale la kufsadey maalmo ka hor wiil da’diisa ay ka yartahay 10 sano kaaso inta la fara xumeeyey hadana la dilay, sidoo kale waxaa jirta iyadan gabar laga soo tuuray dabaq, ka dib markii loo geystay faraxumayn rag la sheegay inay dabaqaas saarnmaayeen.
Waa arin naxdin leh kana fog banii’aadanimada iyo Islaanimada, waxayna ilaa iyo hadda dadka reer Muqdisho la argagaxsanyihiin dhacdooyinkan xu xun ee soo kordhay, mar wax laga weydiiyey saraakiisha booliiska ee dawladda KMG ah inay macneeyaan ama qeexaan cidda waxan ka danbaysa ayey ku gaabsaden oo kaliya inay ku daba jiraan oo ilaa iyo hadana baaritaan ku wadaan.
Muqdisho waxay ahayd waqtiyadii u danbeeyey meel nabad ah oo ka soo kabsatay dagaaladii sida tooska ahaa ugu dhex mari jiray beelaha wada-dhashay ee wadadega, waxase hadda soo ifbaxaya inay afduub iyo kufsi dad wax ma garata ahi kula kacayaan dadka maatada ah ee aan waxba galabsan.
Maadaama aysan dalka ka jirin dawlad awood badan, ayaa waxaa soo badanaya dad ka ganacsada nocyada kala gadisan ee mukhaadaraadka oo uu ka mid yahay xashiishadda, taas oo dadka dambiilayaashaahi ay ka dib ku kacaan wax allaale iyo ay maskaxdooda ka maagaan.
Dhowr xaafadood oo magaalada Muqdisho ka mida ayaa hadda bilaabeen inay samaystaan ciidamo madani ah, oo habeenkii oo dhan rondo ku sameeya xaafadaha ay ku sugan yihiin.
Xaafadahaas waxaa ka mida xaafadda Boondheere, iyo heliwaa oo waaxo ka mida ahi, ammaankooda ay sugtaan dadka ku dhaqan.
Dadka reer Muqdisho ayaa waxay hadda u muqdan inay gaarayaan heer bislaansho, isla markaana ay u guntanayaan, nabadda iyo horumarka, waxaa meelaha qaarkood ka soconaya olole dadku ay isaga qaadanayaa qashinka iyagoo iska uruurinaya tasiilaadkii ay u baahnaayeen.
Dhinaca kale Muqdisho waxaa ka soconaya shaqooyin fara badan, waxaa jira shariikado waaweyn oo ka furan kuna shaqeeya qalab casri ah, waxaa ka furan carwooyin waaweyn oo ilaa habeenkii oo dhan shaqeeya, waxaa soconaya dhismaya dhaadher oo aad u qurxoon waxaa hawada ku jira idaacado iyo taleefishanno ay leeyihiin shaqsiyaad iyo waliba hoggaamiye kooxeedyo.
Waxaa lala soo degayaa maalin walba baabuur aad u qurxoon, waxaa furan ganacsigii gobolada kale oo dhan oo si toos ah ugu xiran magaalada Muqdisho.
Ma jirto, hadda hayb la isku dilo, waxaa Xamar maanta ku wada nool beelo isbaacsan jiray sanado ka hor, saxaafaddu waa xor, dadku waxay is dhaafsan karaan aaraadooda, iyo waxay kala aaminsanyihiin.
Idaacadda Hornafrik oo ay iska leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxay ahayd tii ugu horeysay ee iyadu abuurtay jawi dadku ay isku dhaafsan karaan fikradaha ay kala aaminsan yihiin mid siyaasadeed iyo mid deegaanba.
Idaacadda Horn Afrik oo xarunteedu tahay, Muqdisha waa midda ugu caansan dadkuna ay si aada ugu xiran yihiin, idaacadda Benaadir ayaa iyaduna ka mida idaacadaha laga suurta galiyey Muqdisho, oo iyaduna qayb wayn ka qaadata arimaha nabdda iyo wacyi galinta bulshada.
Waxbarashadii ayaa socota tayaday doontaba ha lahaatee, dugsiyo nidaamiya ayaa shaqaynaya bilaw, dhexdhexaad iyo heer sareba, waxaa dugsidayaas maal galiya wadamada Carabta ah ee ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo waliba Imaaraadka, waxaa iyagana shaqaynaya macahidyo lagu barto culuum kala gedisan oo uu ka mid yahay machadka ASAL COMPUTER oo wax badan ka haqab tiray bulshada Muqdisho degmooyinka ku hareeraysanba dhinaca Kumbuutarka iyo waliba maamulka iyo maaraynta sidoo kale waxaa jirta jaamacadda Muqdisho, oo hadda hana qaaday ka dib markii raga wadaada ahi ay dadaal dheer u galeen waa jaamacadda hadda loogu jecelyahay Muqdisho, dad badanna ka kaafisay inay dibadaha u huleelaan.
Si kastaba ha ahaatee Muqdisho waa magaalo wajiyo badan, horumarka iyo dhibaatooyinkuba way is garab socdaan.
Waxaa xiran dekeddii iyo gagidii diyaaradaha, ka dib markii ay isku khilaafeen beelaha wada dega Muqdisho, waxaa hadda shaqeeya garono macmal ah, iyo dekedo dabiiciya.
FAAFIN: August 6, 2002 | SomaliTalk